Ahoana ny fandefasana tranokala WordPress izay havaozina amin'ny fikarohana | Martech Zone
As WordPress dia manohy mitazona ny tsenan'ny orinasa, manohy mahazo fangatahana maro hafa avy amin'ny orinasa lehibe izay manana tranokala mahafinaritra noforonina tamin'ny marika mahavariana sy ny mpamorona sary - fa tsy misy ny fanatsarana ilaina mba hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fikarohana organika. Alohan'ny hiasantsika amin'ny paikadin'ny votoatiny ho an'ny mpanjifantsika dia manomboka manampy azy ireo amin'ny fanatsarana izahay. Tsy dia misy fampiasana firy amin'ny fampiasam-bola amin'ny atiny premium raha tsy hita ny tranokalanao!
WP Shrug, orinasam-panompoana fanohanana WordPress, nametraka lisitra somary feno ary namoaka izany tamin'ity sary mora vakiana ity. Nanampy orinasa an-jatony tamin'ny fanatsarana ny WordPress izahay ka tsy 100% amidy amin'ny lisitr'izy ireo (fanehoan-kevitra etsy ambany), fa matoky aho fa ny fanarahana an'ity sary ity dia hahatonga anao 99% ho any!
Mila mametraka ny tranonkalanao amin'ny fototra tsara ianao. Azonao atao ny manomboka loha amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo torohevitra 10 fandefasana WordPress ambony ho an'ny vokatra SEO tsara indrindra.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny tranonkala WordPress vaovao
Website hosting - iray amin'ireo antony nifindra monina izahay ary tia an'i Flywheel dia ny hafainganam-pandehan'ireo tranga virtoaly sy cache azy ireo. Ireo mpampiantrano WordPress tantanina dia namboarina manokana ho an'ny fahombiazan'ny WordPress ary tsy hamitaka anao amin'ny fanohanana toy ny fanaon'ny mpampiantrano mahazatra.
CDN - Raha tsy manolotra ny mpampiantrano anao a fifandraisana an-tariby, ny fampidirana iray dia tokony ho laharam-pahamehana. CDNs dia hanampy ny fanananao tranokala mijanona haingana haingana sy manararaotra ny haitao fitetezana sy ny tambajotra jeografika hanakorontanana ny hafainganan'ny tranokalanao.
Lohahevitra SEO Friendly - Ny firafitry ny pejy sy ny famolavolana lohahevitra dia mitsikera tanteraka raha ny amin'ny fanolorana ireo motera fikarohana misy pejy tsara. Ny mari-pamantarana HTML5, ny firafitry ny pejy, ny fivezivezena ary ireo singa hafa dia misy fiantraikany amin'ny fomba ataon'ny lohahevitrareo amin'ny laharam-pahamehana ny votoatinao hikaroka mpikaroka sy manararaotra ny algorithman.
Caching - Averina ihany koa, ny ankamaroan'ny mpamatsy WordPress voatantana dia manolotra mekanisma cache amin'ny fomba maivana. Raha tsy miaraka amin'ny iray ianao dia azonao atao ny misoratra anarana ho an'ny plugin caching tsara tohana sy tsotra, WP Rocket.
Sokajy - Ooh, Tsy mpankafy sokajy tsy misy index aho. Mino aho fa ny sokajy dia manan-danja amin'ny fampisehoana ny ambaratongam-pahefana tranokalano amin'ny motera fikarohana ary manana pejy sokajy miorina amin'ny teny midadasika izay tsy zakan'ny pejy tsy miankina. Matetika aho noindex no pejy tag.
Tags - Tags noindex izahay ary aza mamoaka marika meta singa ao amin'ny lohahevitray. FA, manisy marika tanteraka ny banga amin'ny lahatsoratra rehetra navoakanay izahay! Fa maninona Betsaka amin'ireo mpitsidika no mampiasa ny fikarohana anatiny mba hahitana lahatsoratra - ary ny fanamarihana ireo lahatsoratra ireo dia manome antoka fa hita izy ireo.
Permalinks - A ara-dalàna slug optimaly sy permalink amin'ny lahatsoratra iray dia afaka miantoka ny fahitana ireo lahatsoratrao sy pejy momba ny fikarohana ary misarika ny sain'ny mpikaroka ao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana. Miezaka ny hitazona permalinks faran'izay haingana araka izay azo atao izahay ary ny lahatsoratra mihetsiketsika ao anatin'ny teny 1 ka hatramin'ny 5, manala ireo teny tsy ilaina.
Fanamarihana Spam - Na dia nomen'ny WordPress aza ny rohy nofollow, ny fanokafana ny fanehoan-kevitra amin'ny famoahana tsy misy fankatoavana dia hamadika ny tranokalanao WordPress ho orinasa SPAM. Tsy izany ihany fa ataon'izy ireo misavoritaka ny resaka ao amin'ny tranokalanao… aza ankasitrahana izy ireo!
Lohateny sy famaritana Meta - Miasa mafy amin'ny lohateny sy ny famaritana meta izahay hanatsarana azy ireo amin'ny karoka. Aza adino, ny lohateninao no singa manakiana indrindra ao amin'ny pejy sy ny anao meta description dia ny ady hevitra maharesy lahatra ny amin'ny antony tokony hikarohan'ny olona iray ny rohy anao amin'ny valin'ny motera fikarohana. Tokony hiasa mafy amin'ny lohateny sy ny famaritana meta toy ny ataonao amin'ny atiny ianao!
XML Sitemaps - Efa nanandrana nitady toerana vaovao tsy misy lalana ve ianao? Eny, ny XML Sitemap anao dia manome torolàlana mankany amin'ny motera fikarohana amin'ny toerana misy ny atiny, ny maha-zava-dehibe azy io, ary oviana izy no nohavaozina farany. Isaky ny tranonkala tsy maintsy manana tranokala XML! Izaho koa dia manoro hevitra ny hamantatra ny momba anao sitemap ao amin'ny rakitra robots.txt anao.
Raha manova ny lisitra aho dia angamba esoriko ny sokajy sy ny torohevitra momba ny tag ary ampio ity manaraka ity:
Fampiroboroboana ara-tsosialy - Ireo toerana dia miorina amin'ny lazany. Mba hahitana anao dia tsy maintsy mifandray ianao. Mba hampifandraisana azy dia tokony hasandratra ianao. Ny fampifangaroana ny bokotra fanontana ara-tsosialy sy fizarana ara-tsosialy dia zava-dehibe mba hiantohana ny atiny hizarana sy hampiroboroboana amin'ny fomba mahomby amin'ny Internet.
Webmasters - Ny fandefasana tranokala WordPress tsy misy fisoratana anarana ao amin'ny Webmasters sy ny famantarana ny XML Sitemap dia midika fa tsy azonao antoka fa hita sy voatanisa ny tranokalanao. Ny webmaster koa dia hahita olana amin'ny tranokalanao izay manakana anao tsy hilahatra tsara. Amboary ireo olana ireo dia milahatra tsara ianao!
Fahazoana andraikitra amin'ny finday - Ny antsasaky ny fivezivezena amin'ny fikarohana dia mandeha amin'ny finday ary tian'i Google famolavolana tranonkala mahaliana. Raha tsy nohamarinina ho an'ny finday ianao dia tsy hamboarina ho karoka!
Fialana andraikitra: mampiasa rohy mpiara-miasa amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: fononycachingfanatsarana ny sokajycdnspam hevitrafifandraisana an-taribyflywheelmandefa tranokala WordPressfamaritana metameta tagfandraisana andraikitra amin'ny findaypermalinksmandefa slugSEOseo namana lohahevitraseo lohahevitralohateny seoslugbokotra sosialyfampiroboroboana ara-tsosialyfamoahana sosialybokotra fizarana ara-tsosialybokotra fizarana ara-tsosialyfanehoan-kevitra momba ny spamfanatsarana ny tagfanatsarana lohatenycache amin'ny WordPresssokajy wordpressWordPress hostingfandefasana wordpressfanatsarana ny wordpresswordpress permalinkstenifototra wordpresswp balafomangasitemaps xmlyoast seo
Jul 20, 2016 amin'ny 10: 38 AM
Afaka manampy smth ve aho?
CDN: Mampiasa cloidflare CDN aho - maimaim-poana sy haingana. Tena mankasitraka ahy aho raha afaka manondro izay iray atolotrao.
Fampiantranoana - mampiasa digitalocean aho - fampiantranoana tena tsara, saingy mila fantatrao hoe inona izany console sy ny fomba fiasa izany. Amin'izay ianao hanana vokatra tsara.
Sitemap XML - eny! zavatra tena ilaina io. Tsy azoko ny olona mandingana an'io. Afaka manana fifandraisana ratsy ianao, fa raha sitemap ny XML dia OK - Eo an-tampon'ny ianao.
Ahoana ny momba ny marika kanônika? Mampiasa azy io ve ianao? raha ny page noindex, toy ny pejy tag, mamporisika anao hampiasa tag canonika ve ianao?
20 Jul 2016 amin'ny 2:40 PM
Salama Kottok, tena mamporisika ny marika kanonika tanteraka izahay. Mino aho fa manohana azy ireo amin'ny ampahany amin'ny sehatra WordPress ankehitriny, noho izany dia tsy manao zavatra manokana aho. Mihazakazaka plugins SEO an'ny Yoast aho ary afaka manova azy ireo raha ilaina.
29 Jul 2016 amin'ny 2:00 PM
Marina, tenifototra canonical fanohanana wordpress ary miaraka amin'ny plugins izao dia mora kokoa ny manampy azy 🙂 Tiako plugins
Misaotra indray amin'ny lahatsoratrao!